Fanafihana mitam-basy: 10 lahy nandroba ny volan’ny « Pharmacie Ivato »
dimanche, 06 octobre 2019 10:43
Notafihin’ny jiolahy mitam-basy ny « Pharmacie Ivato », Distrika Ambohidratrimo ny harivan’ny sabotsy 5 oktobra 2019, tokony ho tamin’ny 6ora sy 25min. Folo lahy misaron-tava, nitondra basy poleta roa no nanao ny fanafihana.
Nanapoaka basy in-droa ireo jiolahy nampitahorany ny manodidina. Tao anatin’izany no nandroban’izy ireo ny vola rehetra maty nandritra ny tapakandro tao amin’ity fivarotam-panafody ity, izay tsy mbola fantatra mazava ny tontaliny. Rifatra nitsoaka ireo jiolahy taorian’izay.
Tonga avy hatrany ny Zandary fito lahy avy eo Talatamaty, dimy minitra taorian’ny fampandrenesana azon’izy ireo. Nanao savahao avy hatrany izy ireo ; tonga nanampy azy ireo ny Zandary 12 avy amin’ny Kaompania Ambohidratrimo.
Tsy nisy aina nafoy nandritra ny fanafihana. Nisy bala efatra 9mm misy marika FG LUGER tavela teo amin’ny toerana nitrangan’ny fanafihana, ka efa nampiasaina ny roa tamin’ireo.
Mitohy ny fikarohana ireo jiolahy, mandray an-tanana ny famotorana ny Zandary avy amin’ny brigadin’i Talatamaty.